Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း Androidsis
Cyanogenmod ကိုသုံးပြီး Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
သငျသညျ၏အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင် Samsung Galaxy S3 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် GT-I9300Samsung ၏တရားဝင်မွမ်းမံမှုများကြောင့်၎င်းသည် Android 4.3 ဗားရှင်းတွင်ကျန်ရှိနေသည်ကိုသတိရ။ ၊ terminal သည်အလုပ်လုပ်သင့်သည်၊ ၎င်းသည်အလွန်လေးလံပြီးနှေးကွေးပြီးကမ္ဘာကြီးအတွက်ကုန်ကျသည်။ မည်သည့်အလင်းဖြစ်ပါစေဘယ် application ကိုမဆိုဖွင့်ပါ။ ဒီစာကိုဆက်လက်ဖတ်ရန် (သို့) လက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာပေးရန်သင့်အားအကြံပေးသည်၊ ဒီဟာကဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ Samsung ပစ္စည်းကိုဘဝအသစ်တစ်ခုပေးတော့မယ်Android အတွက်ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီ၎င်းတွင်သင်၌ပျော်မွေ့စရာများစွာရှိပြီး၎င်း၏အလားအလာကိုညှစ်ထုတ်ရန်ဒုတိယအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာမှာတော့မင်းကိုငါသင်ပြမယ် Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်းဆိုလိုသည်မှာယနေ့အချိန်အထိရရှိနိုင်သည့်နောက်ဆုံးပေါ် Android ဗားရှင်းကိုaမှတဆင့်ရယူနိုင်သည် Rom AOSP Cyanogenmod.
1 Cyanogenmod AOSP Rom ဆိုတာဘာလဲ။
3 Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
4 Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့ Cyanogenmod သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
Cyanogenmod AOSP Rom ဆိုတာဘာလဲ။
Cyanogenmod ကဲ့သို့ AOSP Rom သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် Roms CM11သူတို့ roms တွေပါ Android ၏စင်ကြယ်သောဗားရှင်းအပေါ်လုံးဝအခြေခံသည်, အရင်းအမြစ်ကုဒ်သောသောပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Roms Github မှတဆင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူမှမရရှိနိုင်ပါ။ အချို့သော Roms များသည်အလွန်သန့်ရှင်းသော Android ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဇာတိဂူဂဲလ်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ပင်စံမတူပါ။ Rom ရှိသည့် zip ဖိုင် မှလွဲ၍ zip ကို flash ပြုလုပ်ရပါမည်။
ယုတ္တိနည်းအားဖြင့်ဤအလုပ်၏အမျိုးအစား တရား ၀ င် Samsung ထောက်ခံမှုမရှိပါ ထိုကြောင့် ၎င်းတို့တွင်ကိုရီးယားနိုင်ငံစုံ၏လျှောက်လွှာများမရှိပါFM ရေဒီယို၊ တေးဂီတဖွင့်စက်သို့မဟုတ်ကင်မရာကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများကိုဂီတဖွင့်စက်ဖြင့်အစားထိုးလိမ့်မည် Cyanogenmod Apolloသို့မဟုတ် Cyanogenmod ၏ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာ။ FM ရေဒီယိုအပလီကေးရှင်းအနေဖြင့်၎င်း Android ဖုန်းနှင့်မကိုက်ညီပါ Samsung ကိုယ်တိုင်က application driver များကိုထုတ်လွှတ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်.
ကျနော်တို့နှင့်အတူအောင်မြင်ရန်အကောင်းဆုံးအရာတစျခု ကျွန်ုပ်တို့၏ Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ ဤ Cyanogenmod Roms များမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည် OTA မှတဆင့် option ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပါ, Cyano မှယောက်ျားများကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသောကြီးစွာသောအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
တွေ့ဆုံရန်ခံရဖို့လိုအပ်ချက်များကိုတစ် ဦး ရှိခြင်းကဲ့သို့လွယ်ကူသည် Root လုပ်ထားသော terminal နှင့်၎င်းတွင်ပြုပြင်ထားသော Recovery ကိုထည့်သွင်းထားသည်တွင် ဒီသင်ခန်းစာကို ၁၅ မိနစ်အတွင်းဘယ်လိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်aရှိရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် backup EFS ဖိုင်တွဲကျွန်ုပ်တို့၏ Samsung Galaxy S3 ၏ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဖိုင်တွဲတစ်ခုအပြင်အရန်တစ်ခုသို့မဟုတ်သိုမဟုတ်သော nandroid backup ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်နာလန်ထူကိုယ်နှိုက်ကနေဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
USB debugging ကိုဖွင့်ထားရပါမည် ငါဘက်ထရီက၎င်း၏အများဆုံးအဆင့်အထိအားသွင်း 100 က x 100 ဘက်ထရီ terminal ၏အုတ်ကိုပင်အဆုံးသတ်နိုင်သည့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အံ့အားသင့်စရာများကိုရှောင်ရှားရန်။
Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များ
Recovery ကို TWRP ပိုကောင်းတယ်.
Rom Cyanogenmod 11 Android 4.4.4 ၏နောက်ဆုံးပေါ် Snapshoot ဗားရှင်းလစဉ်ပုံမှန် update လုပ်သော version ။
သင်ဤ zip ဖိုင်တွဲသုံးခုကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ပထမတစ်ခုမှာ Recovery TWRP ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်သည်၊ သင်၌နောက်ဆုံးပေါ်မူကွဲရှိပါက၎င်းကိုသင်လျစ်လျူရှုနိုင်သည်။ ဖိုင်များကိုတိုက်ရိုက် zip ထဲတွင်နေရာချရမည် သင် Flash သို့သွားသော Samsung Galaxy S3 ၏ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်၏အမြစ်သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Recovery Mode ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးရိုးရှင်းသော installation ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါလိမ့်မည်။
Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့ Cyanogenmod သို့အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
ပြီးတာနဲ့အတွက် rebooted recovery Mode စာရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။
အားလုံး၏ပထမ ဦး ဆုံး option ကိုသွားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် Install နှင့်ကို select Recovery TWRP ဗားရှင်းအသစ်ထို့နောက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဘားကိုရွှေ့ပါ။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရွေးစရာကိုရွေးချယ်မည့် Main Recovery မျက်နှာပြင်သို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်ပြန်သွားပါမည်။ reboot ပြီးတော့ Recovery Mode ထဲဝင်ပါ.
Terminal ကိုပြန်လည်စတင်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့တွင်အသစ်ပြုပြင်ထားသော TWRP Recovery ဗားရှင်းရှိမည်။
ယခုငါတို့ option ကိုရွေးပါ သုတ် နှင့် option ကိုအတွင်းပိုင်း အဆင့်မြင့် Wipe ငါတို့ရှိသမျှသည်သေတ္တာများ mark ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာ ပြင်ပ SD Card (သို့) Samsung Galaxy S3 ၏ပြင်ပမှတ်ဉာဏ် မှလွဲ၍ ကျန် Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များရှိသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ bar ကိုနောက်တဖန်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့် action ကို execute ။
ယခုငါတို့ option ကိုသွားပါ Install ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပထမ ဦး ဆုံး Rom ၏ Zip ကိုရွေးချယ်ပြီး Gapps ၏ Zip ကိုရွေးပြီးရွေးချယ်ထားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဘားကိုထပ်မံရွှေ့ပြောင်းလိုက်သည်။
အဓိက Recovery မျက်နှာပြင်သို့မရောက်မှီကျွန်ုပ်တို့ပြန်သွားသည်။ Wipe ကိုထပ်မံရိုက်ထည့်ပြီး option များကိုရွေးချယ်ပါ စက်ရုံပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းကိုဖျက်ပစ်ပါ.
နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တယ် ပြီးရင် System ကို Reboot လုပ်ပါ terminal ကိုနောက်ဆုံး version နှင့်ပြန်လည်စတင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေရသည် အန်းဒရွိုက် 4.4.4 ၏သူငယ်ချင်းများကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Cyanogenmod နှင့်၎င်း၏ CM11.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Samsung » Cyanogenmod ကိုသုံးပြီး Samsung Galaxy S3 ကို Android 4.4.4 သို့အဆင့်မြှင့်ပါ
Update ကိုပြုလုပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်။ ရေဒီယိုအတွက်အရမ်းဆိုး
မင်္ဂလာပါဖာနန်ဒိုကိုသင်၏ S3 kitcat သို့အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပါ ??? နှင့်ရေဒီယို application ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရ ??? ဒါဟာမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်
အားလုံးပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် aosp ROM ကိုအသုံးပြုပြီး screen mirroring လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ bloatware မပါဘဲ ROM tw 4.3 ကို download လုပ်တာအကောင်းဆုံး။ Netrom ကအရမ်းကောင်းတယ်။
Androidsis မျက်နှာပြင်၏ mirroring မျက်နှာပြင်ကိုရှာပါ။ aosp roms တွင်ပင် mirroring ကို enable လုပ်နိုင်သည်။ ငါထင်တာမှတ်မိတာကဒီ post ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘယ် Android မှာမဆိုဖန်သားပြင်ထင်ဟပ်ပြသမှုကိုဖွင့်ထားတာနဲ့တူတယ်။
Flavio fonseca ဟုသူကပြောသည်
Flavio Fonseca ကိုပြန်ပြောပါ
recovery နှင့် install လုပ်စရာမလိုပဲ rom နှင့် gapps odin မှ install လုပ်ခြင်းသည်အတူတူလား။
ပါပလော Cruz ဟုသူကပြောသည်
Pablo Cruz အားပြန်ပြောပါ
Ariel Lermudio ဟုသူကပြောသည်
Ariel Lermudio သို့ပြန်ပြောပါ
နောက်ဆုံးပေါ် 4.3 version ဖြင့်စတင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမှာ baseband I4.1.2CEEMG9300 ဗားရှင်း2ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် ၄.၃ odin မှတဆင့် 4.3 ကို update လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ IMEI မှာပြproblemsနာတွေကြုံရပြီးတဲ့နောက်စတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ install လုပ်ခဲ့တယ်။ EFS ဖိုလ်ဒါပုံစံကိုပြောင်းဖို့သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုပြောတယ်ထင်တယ်။
Roberto Perez အားပြန်ကြားပါ
မဟုတ်ပါ၊ Cyanogenmod ကိုထည့်သွင်းရန်နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ တကယ်တော့၊ ဒီ modem သို့မဟုတ် baseband ကိုပြုပြင်မထားဘူးဆိုရင်၊ modem patch လုပ်ထားခြင်းရှိမရှိအရေးမကြီးပါ။
ငါသည်ဤပို့စ်တွင်ဖော်ပြထားသောလမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်၏ဗားရှင်း ၄.၁.၂ တွင် I4.1.2CEEMG9300 modem (ကျွန်ုပ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်နေသည်) ကိုတပ်ဆင်ပြီးပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။
မင်္ဂလာပါ။ ပြ4.4.4နာမရှိဘဲ3Install လုပ်ပါ။ ဖိုင် (၃) ခုလုံးကို download လုပ်ပါ။ twrp ကိုပြproblemsနာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် firmware နဲ့ app တွေကိုပေါင်းထည့်တဲ့အခါအမှားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ firmware ကိုသာတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံစွာအလုပ်လုပ်သည်။ ၎င်းသည်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အလွန်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်ခြင်းရှိသော်လည်းအက်ပလီကေးရှင်းများမှာလမ်းမရှိသော ငါကိုယ်တိုင်တစ် ဦး ချင်းစီအားဖြင့်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
Nestor စစ် ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်းကောင်းများ၊ သင် gapps ကို download လုပ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည် zip ပုံစံဖြင့်မဟုတ်ချေ။ ၎င်းတို့သည် exclamation point နှင့်ထွက်လာသည်။ ၎င်းသည်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုပါ။
nestor guerra မှစာပြန်ရန်
ကောင်းသောညနေခင်းသူငယ်ချင်း။ ငါ gapps ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမလဲ၊ ငါထပ်တူထပ်မျှပြhaveနာရှိသည်၊
ကျွန်ုပ်၏ s3 ကိုလွှတ်လိုက်ပြီ။ အသစ်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအခန်းကို install လုပ်စဉ်ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးသွားမည်လား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Recovery mode ထဲကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော့်ရဲ့ s3 ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့ဒရိုင်ဘာတွေဟာ ... ဖြေရှင်းချက် (သို့) အကြံဥာဏ်တွေမတပ်ဆင်ထားပါဘူး
ဟယ်လို; ကျွန်ုပ်သည်ဤ rom နှင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နေသည်မှာတစ်ခုတည်းသောပြIနာမှာ၎င်းကိုမည်သည့် sim နှင့်မျှသုံးရန် unlock code ဖြင့်မလွှတ်နိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး ကမဆိုဖြေရှင်းချက်ပေးပါ
ZTE ZMAX, အလွန်ချွေတာသော Phablet သည်နှစ်ရက်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိသည်